पैसाको सदुपयोग—अर्थपूर्ण जीवनको लागि बाइबलको सुझाव
ब्यूँझनुहोस्! | सङ्ख्या ३ २०१९
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबानाग इलोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) एफिक एस्टोनियन ओटेटेला कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गारीफुना गिटोंगा गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक चोल जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापटेक (इस्मस) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली डच डुआला डेनिश ड्रेहु तामिल तारास्कान तेलगु तोक पिसिन त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली न्दौ न्यानेका न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिजियन फिनिश फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फ्रान्सेली बाओले बासा (क्यामरून) बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुगान्डा लुभेल लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
धेरै मानिसहरूले बाइबलको सिद्धान्त लागू गरेर आफ्नो आर्थिक समस्या कम गर्न सकेका छन्‌।
राम्रो योजना बनाउनुहोस्‌
बाइबलको सिद्धान्त: “मेहनती मानिसले बनाएको योजना सफल हुन्छ तर हतार गर्ने मानिसहरू कङ्‌गाल हुन्छन्‌।”—हितोपदेश २१:५.
यसको अर्थ के हो? आफूले बनाएको योजनाअनुसार चल्यौँ भने सफल हुनेछौँ। खर्च गर्नुअघि योजना बनाउनुहोस्‌। नबिर्सनुहोस्‌, तपाईँ आफूलाई मन परेको सबै कुरा किन्‍न सक्नुहुन्‍न। त्यसैले बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गर्नुहोस्‌।
बजेटअनुसार चल्नुहोस्‌। आफूलाई चाहिएको सामान जस्तै, खानेकुरा, लुगाफाटा वा अन्य घरेलु सरसामानको सूची बनाउनुहोस्‌। अनि ती सामानहरू किन्‍न कति खर्च लाग्छ, लेख्नुहोस्‌। यदि तपाईँले कुनै सामानमा योजना गरेभन्दा धेरै खर्च गर्नुभयो भने अरू कम महत्त्वपूर्ण सामान किन्‍नको लागि छुट्ट्याएको पैसा प्रयोग गर्नुहोस्‌। उदाहरणको लागि, यदि घरको भाडा तिर्नमा धेरै खर्च भयो भने अनावश्‍यक घुमघाम नगर्नुहोस्‌।
अनावश्‍यक ऋण नलिनुहोस्‌। सकेसम्म ऋण नलिनुहोस्‌। बरु त्यसको सट्टा आफूलाई आवश्‍यक पर्ने सामान किन्‍नको लागि पैसा बचत गर्नुहोस्‌। यदि तपाईँले कसैसित पैसा सापटी माग्नुभएको छ भने सकेसम्म चाँडै पैसा चुक्‍ता गर्नुहोस्‌। यसले गर्दा तपाईँ ऋणमा डुब्नु हुनेछैन। तर यदि तपाईँले पहिले नै कसैसित ऋण लिइसक्नुभएको छ भने त्यो तिर्न योजना बनाउनुहोस्‌ र त्यसैअनुसार तिर्दै जानुहोस्‌।
ऋण लिइरहने मानिसले धेरै पैसा खर्च गर्छ। त्यसैले ऋण लिन लाग्नुभएको छ भने पहिले राम्रोसँग सोचविचार गर्नुहोस्‌।
नराम्रो आनीबानी नदेखाउनुहोस्‌।
बाइबलको सिद्धान्त: “अल्छीले हिउँदमा खेत जोत्दैन; त्यसैले आफूसित केही नभएपछि कटनीको समयमा ऊ मागेर हिँड्‌छ।”—हितोपदेश २०:४.
यसको अर्थ के हो? अल्छीपनाले गरिबी निम्त्याउँछ। मेहनती कामदार हुनुहोस्‌ अनि सक्दो बुद्धिमानीपूर्वक पैसा खर्च गर्नुहोस्‌। साथै भविष्यको लागि पनि केही जोहो गरेर राख्नुहोस्‌।
कडा परिश्रम गर्नुहोस्‌। यदि तपाईँ परिश्रमी र जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने हाकिमले तपाईँलाई काममा राख्न इच्छुक हुनेछन्‌।
इमानदार हुनुहोस्‌। चोरी नगर्नुहोस्‌। यदि तपाईँ बेइमान हुनुभयो भने कसैले पनि तपाईँलाई काममा राख्ने छैन।
लोभी नहुनुहोस्‌। धेरै पैसा कमाउने धुनमा लाग्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्य र अरूसितको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। नबिर्सनुहोस्‌, जीवनमा पैसा नै सबथोक होइन।
बाइबलका अरू सिद्धान्तहरू
अनलाइन बाइबल पढ्‌नुहोस्‌। jw.org मा थुप्रै भाषामा बाइबल उपलब्ध छ
कुलतमा समय र पैसा खर्च नगर्नुहोस्‌।
“जँड्‌याहा र घिचुवा कङ्‌गाल हुनेछ अनि निद्राले थाङ्‌ने बनाइदिन्छ।”—हितोपदेश २३:२१.
अनावश्‍यक चिन्ता नलिनुहोस्‌।
“के खाऔँला वा के पिऔँला भनी आफ्नो जीवनको विषयमा वा के लगाऔँला भनी आफ्नो शरीरको विषयमा चिन्ता गर्न छोडिहाल।”—मत्ति ६:२५.
“डाही मानिस धनी हुन आतुर हुन्छ तर आफूमाथि गरिबी आइपर्नेछ भनेर उसलाई थाहै हुँदैन।”—हितोपदेश २८:२२.
आफैलाई जाँच्न तयार पारिएको सात वटा प्रश्नले पैसाप्रति तपाईंको दृष्टिकोण जाँच्न मदत गर्छ।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने पैसाको सदुपयोग
आधुनिक जीवनको लागि प्राचीन किताब
परिवार तथा साथीभाइसितको सम्बन्ध
इतिहासकै सबैभन्दा मदतकारी किताब
ब्यूँझनुहोस्‌! पत्रिकाको यस अङ्‌कमा: दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने किताब
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प ब्यूँझनुहोस्! दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने किताब
शेयर गर्ने शेयर गर्ने ब्यूँझनुहोस्! दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने किताब
दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने किताब
ब्यूँझनुहोस्! दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने किताब
कम खर्चमा कसरी गुजारा टार्ने
खर्च कसरी कम गर्ने